18:20 - 19 Mar
02 Sep 2016 - Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, Dowladda Maraykanka, Sweden iyo Talyaaniga ayaa soo dhoweeyay diyaar-garowga loogu jiro hirgelinta geedi-socodka 2016ka ee doorashada Soomaaliya.
30 Aug 2016 - WAR-SAXAAFADEED 23/2016
27 Aug 2016 - WAR-SAXAAFADEED 22/2016
21 Aug 2016 - WAR-SAXAAFADEED 21/2016 Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay (SRSG) u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating, ayaa si kulul u cambaareeyay labadii qarax ee saaka ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay ugu yaraan 12 qof laguna dhaawacay dad kor u dhaafaya 25.
14 Aug 2016 - WAR-SAXAAFADEED 20/2016 Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay (SRSG) u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating, ayaa soo dhoweeyay saxiixa Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, uu ku ansaxiyay hindise sharciyeedka Guddiga Qaran ee Xuquuqul Insaanka, taasoo ka dhacday xaflad maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
26 Jul 2016 - Xoghayaha-Guud ayaa cambaareeyay weerarki argagixiso ee maanta ka dhacay agagaarka Gegida Dayuuradaha ee Caalamiga ah ee Muqdisho. Wuxuu tacsi tiraanyo leh u diray saaxiibada iyo qoysaska dadki ku geeriyooday, wuxuuna inti ku dhaawacantay u rajeeyay inay si dhakhso leh u bogsoodaan.
26 Jul 2016 - WAR-SAXAAFADEED 19/2016
06 Jul 2016 - WAR-SAXAAFADEED 18/2016 Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay (SRSG) u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating ayaa hambalyo ku aaddan munaasabadda Ciidda Soonfurka (Ciidul Fitriga) u diray dhamaan dadka Soomaaliyeed.
01 Jul 2016 - WAR-SAXAAFADEED 17/2016
UNSOM oo xustay Maalinta Caalamiga ah ee Ciribtirka Xadgudubka Jinsiga ee Xiliyada Colaadaha
WAR-SAXAAFADEED 09/2018 Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating ayaa maamuusay dhibanayaasha iyo kuwa ka badbaaday xadgudubka jinsiga ee ka dhaca dalka, [qorshahan] ayaa qayb ka ah dabaaldegga caalamiga ah ee Maalinta Caalamiga ah ee Ciribtirka Xadgudubka Jinsiga ee Xiliyada Colaadaha.